Kurwara kwaHezekiya uye kupora kwake (1-22)
Rwiyo rwekutenda (10-20)
38 Mumazuva iwayo Hezekiya akarwara zvekuda kufa.+ Muprofita Isaya+ mwanakomana waAmozi akauya akati kwaari, “Zvanzi naJehovha: ‘Ronga nyaya dzemhuri yako, nekuti uchafa; hausi kuzopora.’”+ 2 Hezekiya akabva atarisa kumadziro, akatanga kunyengetera kuna Jehovha achiti: 3 “Ndinokutetererai, haiwa Jehovha, ndapota yeukai+ kuti ndakafamba pamberi penyu ndakatendeka, nemwoyo wakaperera kwamuri,+ uye kuti ndakaita zvakanaka pamberi penyu.” Hezekiya akabva atanga kuchema chaizvo. 4 Shoko raJehovha rakabva rauya kuna Isaya, richiti: 5 “Dzokera unoti kuna Hezekiya,+ ‘Zvanzi naJehovha Mwari watateguru vako Dhavhidhi: “Ndanzwa munyengetero wako.+ Ndaona misodzi yako.+ Ndichawedzera makore 15 paupenyu hwako,*+ 6 uye ndichakununura iwe neguta rino paruoko rwamambo weAsiriya, uye ndicharwira guta rino.+ 7 Ichi ndicho chiratidzo chinobva kuna Jehovha chekuti Jehovha achaita zvaataura:+ 8 Ndichaita kuti mumvuri waiswa nezuva pamasitepisi* aAhazi udzoke shure nemasitepisi gumi.”’”+ Saka zuva rakadzokera shure nemasitepisi gumi pamasitepisi arakanga ratodzika. 9 Izvi ndizvo zvakanyorwa naHezekiya mambo weJudha, paakarwara akapora paurwere hwake. 10 Ndakati: “Pakati peupenyu hwanguNdichafanira kupinda mumagedhi eGuva.* Ndichanyimwa makore angu asara.” 11 Ndakati: “Handichazooni Jah,* iye Jah, munyika yevapenyu.+ Handichazotarisizve vanhuPandinenge ndiine vagari vemunzvimbo inoguma zvinhu zvese. 12 Nzvimbo yangu yekugara yadzurwa uye yabviswa kwandiri+Setende remufudzi. Ndapeta upenyu hwangu semunhu anogadzira machira. Anondigura seshinda dzejira. Kubva masikati kusvika usiku munoramba muchindiisa kumugumo.+ 13 Ndinodzikama kusvika mangwanani. Anoramba achipwanya mapfupa angu ese sezvinoitwa neshumba;Kubva masikati kusvika usiku munoramba muchindiisa kumugumo.+ 14 Ndinoramba ndichirira senyenganyenga,* kana kuti sekadhimba;*+Ndinoramba ndichigururudza senjiva.+ Maziso angu anotarisa kumusoro akaneta, ndichiti:+ ‘Haiwa Jehovha, ndiri kunetseka chaizvo;Nditsigirei.’*+ 15 Ndingataurei? Ataura neni uye ane zvaaita. Makore angu ese ndichafamba ndichizvininipisa*Nemhaka yekushungurudzika kwangu.* 16 ‘Haiwa Jehovha, munhu wese anorarama nezvinhu izvi,*Uye mazviri ndimo mune simba rangu reupenyu. Muchaita kuti ndivezve neutano mondichengetedza ndiri mupenyu.+ 17 Onai! Ndakashungurudzika chaizvo panzvimbo pekuva nerugare;Asi nekuti makandida,*Makaita kuti ndisapinda mugomba rekuparadzwa.+ Makarasira zvivi zvangu zvese shure kwenyu.*+ 18 Nekuti Guva harigoni kukukudzai,+Rufu harugoni kukurumbidzai.+ Vaya vanopinda mugomba havagoni kutarisira kutendeka kwenyu.+ 19 Vapenyu, ivo vapenyu vanogona kukurumbidzai,Sezvandinogonawo kuita nhasi. Baba vanogona kupa vanakomana vavo ruzivo pamusoro pekutendeka kwenyu.+ 20 Haiwa Jehovha, ndiponesei,Uye ticharidza nziyo dzangu pazviridzwa zvine tambo+Mazuva ese eupenyu hwedu paimba yaJehovha.’”+ 21 Isaya akabva ati: “Unzai keke remaonde akaomeswa, muriise pamota kuti apore.”+ 22 Hezekiya akanga abvunza kuti: “Ndechipi chiratidzo chekuti ndichaenda kuimba yaJehovha?”+
^ ChiHeb., “pamazuva ako.”
^ Masitepisi aya anogona kunge aishandiswa kuona pava nenguva uchitarisa panenge pava nemumvuri.
^ Kana kuti “semherepere.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “sehoriori.”
^ ChiHeb., “Ivai chibatiso changu.”
^ Kana kuti “ndakanyarara.”
^ Kana kuti “kwemweya wangu.”
^ Kureva, mashoko aMwari nemabasa ake.
^ Kana kuti “makada mweya wangu.”
^ Kana kuti “Makabvisa zvivi zvangu zvese pamberi penyu.”